China Bed Windsor Bed Solid Wood Bedroom Bed Bed Bed # 0114 Nrụpụta na Factory | Yamazonhome
Obere Ime ụlọ Ifuru Ime Anyanwụ Siri ike Bed Bed Bed # 0114
Dị ： European
Nọmba nlereanya: Amac-0114
Nha: 1980mm * 2120 * 980mm
Windsor backrest osisi akwa siri ike
Otu esi emepụta ime ụlọ na-enye ume ọhụrụ ma na-eku ume? Mgbanwe ahụ malitere site na ịhọrọ isi eriri yiri eriri. Ihe ndina ahu nile bu osisi siri ike. ogwe osisi? Mkpuchi? Ọ dịghị onye n'ime ha na-adị, na gburugburu ebe obibi enyi na enyi akwa osisi, n'ihi ya, i nwere ike iji ha obi ike. Isi ihe bụ osisi oak, ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị eke na-enweghị nhịahụ sitere n'akụkụ ọ bụla. Enweghị isi pụrụ iche, ísì ụtọ nke osisi na-amịkọrọ, na-enye gị ahụ izu ike na oke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Osisi akwa akwa siri ike na-ebu ibu ahụ
Osisi oak dị mma nke ukwuu. Edere ya ma ọ bụ gbaa ọcha ya tupu ịhapụ ụlọ ọrụ ahụ, yabụ ị nwere ike ihi ụra n'udo. A na-edozi akwa akwa akwa ọ bụla, yana usoro nnabata na usoro, nke na - eme ka ikike nkwado nke akwa akwa dịkwuo ukwuu. Eji nlezianya dozie ahụ gị niile iji nye gị ụlọ dị nro na ịdị larịị. Enweghị ụlọ mmanya, na ịma mma mbụ nke ọka osisi na-ejigide ya na oke, na-enye gị ohere ịnụ ịma mma nke okike n'ụlọ.
Nchebe dị elu na njedebe nke ihe ndina ya
A na-edozi akwa akwa na ụkwụ nke akwa ahụ na ngwaike ngwanrọ dị elu iji hụ na akwa osisi siri ike adịghị mfe ịma jijiji. Ejikọtara ya na akwa ụra, ọ na-ewepụ mmetụta na-agwụ ike ma nwee ume na ịma mma. Anyị na-egbu nkuku ọ bụla ka ọ gbaa gburugburu ma dịkwa ire ụtọ na-enweghị burrs. Ngwa ngwanrọ dị elu Agaghị enwe nsogbu ndị dị ka nchara, mkpọtụ, wdg, iji mepụta ebe obibi dị jụụ ma dịkwa jụụ.
Otu-ibe thickened ụkwụ
Otu-ibe oké osisi siri ike cylindrical ụkwụ, na nkà mmụta sayensị uche n'akuku, ọzọ ike ibu-amị. Ala nwere mpempe akwụkwọ enwere mmetụta, nke dị mfe ịkwaga, ma ọ naghị emepụta ụda, na-ebelata esemokwu esemokwu nke ala gị na akwa akwa, ma na-abawanye ndụ ọrụ. Hollowed The Windsor backrest na-eme ka mkpokọta ohere doro anya ma dị mfe, na agaghị egbochi gị akwụkwọ ahụaja.
Hapụ ebe nchekwa zuru ezu na ala
Ihe ndina dị n’elu osisi oak dị ọcha, nke kwụsiri ike ma sie ike, na-eme ka akwa ahụ dum sie ike. Ogologo zuru ezu site na ala nwere ike ime ka oghere dị. Tinye igbe nchekwa na akpụkpọ ụkwụ ole na ole, mana ọ naghị atụ aro ka ị jupụta ya. Nke a agaghị enyere aka na ventilashion nke akwa akwa. Dịkwuo na matraasi nke ọma iji mepụta ezigbo ala ịgha elu, ị nwere ike iru ihe ndị dị na tebụl akwa n'akụkụ site na ịgbatị aka.
Nke gara aga: White Oak Multifunctional Ugboro abụọ Bed Solid Wood Ime Bed # 0113
Osote: China Factory 8M 10M Yi Customize Air Trick Pool ise n'elu Inflatable Yoga ute 0395
Nordic Light okomoko Creative Ngwá Ọrụ Fabric # ...
Nordic minimalist ọcha nnukwu osisi siri ike osisi obere ap ...
Osisi Deluxe Elu Cat House na Ihe Owuwu chzọ Mbata na ...